နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Renewal of Myanmar Passport (ကိုယ်တွေ့)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:43 PM
သက်ဝေ August 8, 2010 at 4:39 PM
ကားပါမစ် ချပေးရင် ရရပါစေ့မယ်... ဟမ်
ကလူသစ် August 8, 2010 at 4:51 PM
ကိုပေါ August 8, 2010 at 4:58 PM
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု...
မောင်ဘွိုင်းဇ်ရဲ့ချွေးနည်းစာအလှူငွေကို အဘမြေးလေး ပညာရေးအတွက် သုံးပေးပါ့မယ်။
စန္ဒကူး August 8, 2010 at 5:28 PM
တော်သေးတယ်.. Agent ရှိလို့..
တို့များဘ၀..Agent မရှိ.. (၅) ခေါက်လောက်.. ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လှမ်းလိုက်ရတယ်.. အလုပ် (၅)ရက်ပျက်..း(
ချစ်ကြည်အေး August 8, 2010 at 10:48 PM
လာမဲ့တပတ်မှာ မမတို့ ဘလောဂ့်အသံက လွှင့်မဲ့ "အလှူဒါန ပြုကြသူငါ" ကဏ္ဍအတွက် အင်တာဗျူးချင်ပါတယ် ရှန့်....
ဖိုးတုတ် August 8, 2010 at 11:26 PM
ပါစ်ပို.အသစ်က စလုံး ၁၅၀လား အရင်က ၃၀၀ ဆိုတော့ အကောင်းဘက်ကတွေးရင် 50% discount ပေါ့
အလှူပေးသူဌေးဖြစ်မဟုတ်ပဲ အလှူပေးပြီး ဆင်းရဲသွားတယ် အခွန် ၁၀% ကတော့များလွန်းပါတယ်
Ko Boyz August 9, 2010 at 12:29 AM
မသက်ဝေ - ချပေးမယ့် ကားပါမစ်ကို မျှော်နေပါဒယ်။
ကလူသစ် - အတော်ကို ဝမ်းသာအားရနဲ့ သာဓုခေါ်နေတာ မြင်ရဖတ်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
ကိုပေါ - အဲဂလိုလားဟင်။
စန္ဒကူး - ဘယ်တုန်းက သွားဆောင်တာလဲဟင်။ အေးဂျင့်တွေက ရှိတာ တစ်နှစ်မကတော့ဘူး ထင်တယ်။
မချစ်ကြည်အေး - လောလောဆယ်တော့ စီဘောက်မှာ ထောပနာပြုသွားလို့ အင်တာဗျူး ရက်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါဦး။ :P
ကိုကိုစန်း - ပတ်စ်ပို့ အသစ် နှုန်းထားက ၁၅၀ ပါ။ စာအုပ်အသစ် မိတ်ဆက်မို့ ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ဒစ်စကောင့်ပေးတာပါ။ (နောက်တာပါ။) အခု ပုံမှန်အားလုံး ၁၅၀ ဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ အခွန်၁၀%ကတော့ လူတိုင်းပေးရတဲ့ နှုန်းပါပဲလေ...။
mae August 9, 2010 at 8:22 AM
ဒီမှာ နေရတာ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ စကာင်္ပူက သံရုံးနဲ့ ဝေးသွားတာလဲ ပါတယ်
စန္ဒကူး August 9, 2010 at 2:17 PM
ko boyz... ကူးကူး က ပူပူ မှာ ဟုတ်ဘူး...လေ..
မြန်မာလဲ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ agent ရှိဝူးလေ...
ဖိုးတုတ် August 9, 2010 at 6:40 PM
ရန်ကုန်က လာတဲ့အသိတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်စ်ပို.အသစ်ကို ယူကြည့်မိတယ် အထဲက စာရွက်တွေက ပိုကောင်းလာသလိုပဲ နှောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အရှေ.တောင်အာရှမှာ မြန်မာ ပတ်စ်ပို.က ဗီဇာမလိုပဲ ခရီးသွားလို.ရရင်ကောင်းမယ်
လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြတဲ့အတွက် ခင်ဗျားကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်
T T Sweet August 10, 2010 at 7:26 AM
အတွေ့အကြုံလေးပြောပြတာ ကျေးဇူးပဲ Ko boyz ...
အိမ်မှာလဲ ၃ယောက်စာလုပ်ရဦးမယ် ... Ko boyz လိုပဲ အေးဂျင့်အပ်တာ အကောင်းဆုံးလို့တော့ ပြောနေကြတယ်။
သာဓု ၃ကြိမ်လဲခေါ်သွားပါတယ်။ များတို့အလှူကျလဲ လာခေါ်ဥင်္ီးနော် ...
HI Ko Boyz,
forward mail ထဲကနေ Avoidance of Double Taxation အကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်၊
ပေးစရာမလိုပဲ မပေးချင်ပဲပေးနေရတဲ့အခွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး KO Boyz အမြင်လေး သိပါရစေ
shweyoe August 12, 2010 at 8:18 PM
I can't read this post because the words are jumbled up. But some post I can read. Can you advise what to do? I used Window Vista Pro. When I installed ZawGyi font, I couldn't see true type font. You canemail to me at shweyoe@gmail.com
Ko Boyz August 12, 2010 at 9:52 PM
@Azure, we got no choice.... !_!
@ShweYow, alternately you can use firefox browser to read the blog. Less hassle than IE. :)